हिमाले मालाको घरमै देखाईन दा’दागि’री ! १५ हजार माग्दै गरेको भिडियो बाहिरियो, भाइरल हुन मालाको प्रयोग गरेको खुलासा (भिडियो सहित) – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Video/हिमाले मालाको घरमै देखाईन दा’दागि’री ! १५ हजार माग्दै गरेको भिडियो बाहिरियो, भाइरल हुन मालाको प्रयोग गरेको खुलासा (भिडियो सहित)
हिमाले मालाको घरमै देखाईन दा’दागि’री ! १५ हजार माग्दै गरेको भिडियो बाहिरियो, भाइरल हुन मालाको प्रयोग गरेको खुलासा (भिडियो सहित)
केही दिन अगाडी पि’डित भनिएकी माला शाह, हिमा श्रेष्ठ र अन्य केही महिलाको साथमा उनीहरु जर्नेल खत्रीको घरसम्म पुगेका थिए । जर्नेलको घर घेराउ गर्न पुगेका माला र हेमासहित ६ जना महिलालाई प्रहरी प’क्राउ गरेर ल’ठ्ठी पनि बर्साएको थियो । नेपाली सेनाका पुर्व जर्नेल हेम खत्रीबाट पि’डित भनिएकी माला शाह र अर्की श्रीमान पि’डित हिमा श्रेष्ठबीच पैसाको कुरालाई लिएर वि’वाद भएको छ ।
हिजो मात्र पुण्य गौतममाथि हा’तपा’त भएको थियो भने उनी बेहोस पनि भएका थिए । अडियो सार्वजनिक हुने ड’रले पुण्य बेहोस भएको पनि केही मिडियाकर्मीले बताएका छन् । हिमाले मालाको घरमै दा’दागि’री देखाएकी छिन् । १५ हजार माग्दै गरेको भिडियो बाहिरिएको छ । माला शाह र हिमा श्रेष्ठबीच भएको विवाद बिस्तृतमा तलको भिडियोमा हेर्नुस् :
प्यास मेटाउन आएको युवा स्त’नपान गरेर फर्कियो,आफ्नै बाबुले को’ठीमा बे’चिएकी चेलीको वास्तविक जीवनको कारुणिक जीवनकथा (भिडियो सहित)